Miandry anao ao amin'ny Tranombakoka Komik Digital | Famoronana an-tserasera
Soa ihany isika fa manana safidy hafa maromaro hidirana amin'ny atiny haino aman-jery nomerika avo lenta izay misy ifandraisany amin'ny tantara an-tsary na tantara an-tsary mandritra ny androm-piainana. Ny takelaka, finday avo lenta ary mpamaky dia mamela antsika hanana amin'ny fitaovantsika ny fahafahana ho tonga alohan'ny isa vaovao an'ny maherifo ankafizintsika, ary koa ireo izay narahin'ny raibe sy renibentsika taompolo vitsivitsy lasa izay.
Ireo tantara an-tsary sy tantara an-tsary ireo no angonin'ny Digital Comic Museum, a tranonkala an-tserasera manokana noho ny fananana ireo sary an-tsary izay novakin'ny zokiny indrindra tao an-trano. Hetsika tena mahaliana ary amin'ny tenany manokana no manararaotra an'io tantara an-tsary goavambe goavambe io izay lasa sehatra ho an'ny daholobe ambanin'ny lalàn'i Etazonia.
Ka na inona na inona tantara an-tsary navoaka talohan'ny 1959 dia hita ao amin'ny Digital Comic Museum. Tranonkala afaka ho loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny atiny avo lenta izay raketiny, satria tsy mora ny miditra amin'ny tantara an-tsary hatramin'ny am-polony taona maro ary eto no angonina amin'ny karazana fanangonana rehetra.
Izy io koa dia loharanom-pahalalana manokana ho an'ireo izay manomboka mianatra ny karazana fifehezana mifandraika amin'ny fanaovana sary, satria tadidiko tsara ny antony nanosika antsika hanao sary an'ireo sary hitantsika tao amin'ny karazana magazine. Ka ny fananana karazana mpanao sariitatra rehetra maneho an-tsary ireo sary an-tsary miaraka amin'ny lohahevitra rehetra dia fananana sarobidy.
Ny hany zavatra tsy maintsy ataonao mba hisintomana ny tantara an-tsary dia mamorona kaonty raha te hifindra any amin'ny 25MB izay mandanjalanja ny sasany ary hanome anao ireo karazana traikefa nahafinaritra anao. Mazava ho azy fa amin'ny anglisy izy ireo. Raha efa mitady fotoana hafa ianao dia aza adino ity safidin'ny namako Fran Marín ity.
Fidirana avy eto tranom-bakoka komika nomerika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Digital Comic Museum dia tranokala manokana ahafahanao mahita tantara an-tsary komisim-bahoaka